अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्ड भित्र्याउन ठाउँको अभाव मुख्य समस्या | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्ड भित्र्याउन ठाउँको अभाव मुख्य समस्या
on: १३ मंसिर २०७५, बिहीबार ०८:५७ अन्तरवार्ता
आरपी ग्रूपले नेपालमा विदेशी ब्राण्डका सामानको व्यवसाय गर्दै आएको छ । यसले दा मिलानो, इण्डियन टेरेनलगायत अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका उत्पादन होलसेल तथा खुद्रा विक्री गर्छ । नेपालमा विश्वस्तरीय सामानको माग तथा गुणस्तरप्रति उपभोक्ताको रुचिसमेत बढिरहेको कम्पनीको भनाइ छ । यही सन्दर्भमा आफूहरूले गरिरहेको व्यापार व्यवसायबाट नेपाली उपभोक्ता तथा व्यापारीसमेत लाभान्वित भएको कम्पनीको दाबी छ । नेपालमा ब्राण्डेड भनी गुणस्तरीय सामान भित्रिरहेको परिप्रेक्ष्यमा कम्पनीले गरिरहेको व्यवसायबाट नेपाल र नेपालीले पाउने फाइदा तथा अन्तरराष्ट्रिय सामग्रीको नेपाली बजार, समस्या र चुनौतीबारे उक्त ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक रूपेश पाण्डेसँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार :
आरपी ग्रूप प्रालि कस्तो कम्पनी हो र यसले नेपालका कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ?
आरपी ग्रूप प्रालि १० वर्षपहिले स्थापित ट्रेडिङ हाउस कम्पनी हो । यसले खासगरी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका कपडा आयात गरी होलसेल तथा आफ्नै आउटलेटमार्फत विक्री गर्दै आएको छ । नेपालमा बदलिँदो परिवेशअनुसार अहिले उपभोक्ताको चाहना र क्रयशक्ति पनि बढ्दो छ । सोहीअनुरूप नेपालमा विश्वस्तरका ब्राण्ड ल्याउनुपर्छ भन्ने कम्पनीको मान्यता छ । सोहीअनुसार कम्पनीले फ्रेञ्चाइजीको रूपमा आउटलेट खोलेर ती ब्राण्डको विक्रीवितरण गरिरहेको छ । यस ग्रूपअन्तर्गत आरपी ट्रेड प्रालि, जय अम्बे सारी शोरूम प्रालि, अन्सु इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि, अन्सु सप्लायर्स प्रालि, फेशन स्टोर्स नेपाल प्रालिलगायत कम्पनी छन् ।
यो कम्पनीमार्फत कुन कुन विदेशी ब्राण्डको कारोबार हुन्छ ?
हामीले अहिले दा मिलानो इटालिया, इण्डियन टेरेन, रोसो ब्रुनेलियो, डब्ल्यू ओरिलिया, सेलियो, क्याक्स, जोस ए बैङ्क, विशफुललगायत ब्राण्डको कारोबार गरेका छौं । अब छिट्टै अल डो ब्राण्डको नयाँ ब्राण्ड काठमाडौंमा सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं । यसमा महिला र पुरुषले लगाउने सबै खालका कपडा, चप्पल, जुत्तादेखि सबै खालका सामान उपलब्ध हुन्छ ।
कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डको काम गरिरहँदा उपभोक्ताको रुचि र ब्राण्डप्रतिको सचेतना कस्तो पाउनु भएको छ ?
मेरो १० वर्षको अनुभवमा अहिले उपभोक्ताको सचेतना बढेको देख्छु । पहिले सामान किन्दा उपभोक्ता मात्र होइन, व्यवसाय गर्नेलाई पनि सामान भए पुग्थ्यो । सुटको कपडा होस् या जुत्ता आफूलाई मिल्ने वा सुहाउने भेट्टायो भने भयो । त्यसको गुणस्तरप्रति खासै वास्ता हुँदैनथ्यो । ब्राण्डप्रति उपभोक्ताको रुचि तथा सचेतना बढ्न थालेपछि व्यवसाय गर्नेले पनि ब्राण्ड, त्यसको गुणस्तरमा ध्यान दिन थाले । यो सबै उपभोक्ताकै कारण भएको हो । अहिले कुनै सामान खरीद गर्न सय जना आउँदा ९० जनाले ब्राण्ड र त्यसको गुणस्तरबारे चासो राख्छन् । कतिसम्म भने उक्त वस्तुको रङ जान्छ कि जाँदैन, फिनिशिङ कस्तो छ लगायत प्रश्न नगरी वा अन्य ब्राण्डसँग तुलना नगरी किन्दैनन् । अर्कोतर्फ नेपालीमा ब्राण्डेड कपडा लगाउने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ । यसरी हेर्दा ब्राण्डप्रतिको सचेतना बढेको देखिन्छ ।
नेपाल अन्तरराष्ट्रिय स्तरका विभिन्न खालका सामानको डम्पिङ साइटजस्तै बनिरहको छ । बजारमा हेर्दा पनि कमसल सामानकै व्यापारको वर्चस्व रहेको जस्तो दखिन्छ । तपाईं ब्राण्डप्रति उपभोक्ताको सचेतना बढेको भन्नु हुन्छ । यो कसरी मान्ने ?
हो, तपाईंले भनेको (डम्पिङ साइट) जस्तै भएको छ । त्यसैले त उपभोक्ताको सचेतना बढेको छ । ब्राण्डको नाममा नक्कली सामान लिएर आए पनि अब ती नेपाली बजारमा धेरै टिक्दैनन् । किनभने कुन ब्राण्डको कुन गुणस्तर छ र मूल्य कति पर्छ, यो सबै विषयमा उपभोक्ताले हेर्ने गरेका छन् । उपभोक्ता सचेतनाकै कारण डम्पिङ साइट बन्न पनि यसले रोक्छ । तर, यसमा सरकार पनि लाग्नु जरुरी छ ।
सरकार एण्टी डम्पिङ ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसमा सम्बद्ध व्यवसायीबाट विरोध हुने होला । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
नेपाललाई डम्पिङ साइट बन्न र भइरहेको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन यथाशक्य छिटो यो ऐन ल्याउनुपर्छ । यो त स्वागतयोग्य कुरा हो । यो ऐन तत्कालै ल्याउनुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा गाह्रो काम नै ब्राण्डेड सामानको विक्री गर्नु भएको छ । किनभने हरेक सामानको नक्कली वस्तु बजारमा छ । त्यसो हुन नदिन सरकारको यो कदम ठीक हो । अर्थमन्त्रीले पनि विभिन्न ठाउँमा नेपाललाई डम्पिङ साइट बन्न नदिन सशक्त कानूनको खाँचो औंल्याएका छन् । यो ऐन आउँदा, अझ भनौं कुनै न कुनै रूपमा नक्कली सामानको विक्रीवितरण बन्द हुनु राज्य र उपभोक्ता दुवैका लागि फाइदाजनक नै हुन्छ ।
नक्कली सामानको आयात रोक्न तत्कालै अन्य केही उपाय छन् कि ?
नक्कली सामान रोक्न भन्सार कार्यालयले पहिले त आयातकर्तासँग कुनै पनि वस्तुको ओरिजिन सर्टिफिकेट माग्नुपर्‍यो । त्यो माग्नेबित्तिकै धेरै समस्याको सामाधान एकै पटक निस्किन्छ । आयातकर्ताले कुनै ब्राण्डको लोगो र लेबल लगाएर नेपालमा ल्याइरहेको छ भने भन्सारबाटै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिले जति पनि ब्राण्डका नक्कली ब्राण्ड आएका छन्, ती पनि त भन्सार गराएरै आएका हुन् नि !
सबै नेपालीले ब्राण्डेड सामग्री नै खरीद गर्छन् भन्ने पनि त नहोला । उपभोक्ताले क्रयशक्तिको आधारमा खरीद गर्ने हो । यसले त उपभोक्तालाई समस्या पार्दैन ?
हो, नेपालमा औंलामा गन्न सकिने व्यवसायीले मात्र ब्राण्डेड सामग्रीको कारोबार गर्ने गरेका छन् । तर, यसको नाममा जसले पायो, उसले विक्रीवितरण गर्दा समस्या छ । अहिले पनि ब्राण्डकै नाममा काम गर्नेहरूले पनि भारतमा वर्षको चारपटक लाग्ने अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डहरूको मेलामा गएर ५० प्रतिशत छूटमा पाइने सेलका सामान ल्याउँछन् । यसमा ४० प्रतिशतकै मार्जिन दिए पनि व्यवसायीलाई राम्रो नाफा हुने भयो । यसो गर्दा भन्सार पनि कम लाग्ने भयो । यी सबै कुरा आम उपभोक्तालाई पनि थाहा हुँदैन । यी सबै काम बैङ्किङ माध्यमबाट भएमा एकातर्फ भन्सार पनि बढ्छ, अर्कोतर्फ उपभोक्ताले ब्राण्डको गुणस्तरीय सामान पाउँछन् । यो प्रक्रियाबाट जाँदा आयात गर्ने कम्पनीले सामान बैङ्कको च्यानलबाट मगाएको छ/छैन, उत्पादित ब्राण्डको ओरिजिन सर्टिफिकेट, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी प्रिण्ट) कति हो, त्यसको लेबलसहित आउनु पर्‍यो । यसरी आयो भने कहीँ पनि तलमाथि हुनै सक्दैन ।
तपाईंको कम्पनीले एमआरपी प्रिण्टसहित सामान आयात गर्ने गरेको छ त ?
अवश्य पनि । नेपालमा सबैभन्दा पहिले ब्राण्डेड सामानमा एमआरपी प्रिण्ट गरेर ल्याउने पहिलो कम्पनी आरपी ग्रूप नै हो । हामीले मगाउने सबै ब्राण्डका सामान ५ वर्ष अघिदेखि नै एमआरपी प्रिण्टसहित आउँछन् । कारोबार गर्ने कम्पनीसँग ‘कोर्ट एग्रिमेण्ट’अनुसार काम गरेका छौं । साथै, त्यो वस्तु नेपालमा कतिमा विक्री गर्न सकिन्छ भनेर उहीँ मूल्य राखेर ल्याउने गरेका छौं ।
ब्राण्डका नाममा उपभोक्ता ठगिएका छन् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?
अब त्यसरी ठग्न गाह्रो छ । कति पटक ठग्ने ? कुनै पनि सामान किन्नुपूर्व उपभोक्ताले गूगलका माध्यममा पनि त्यसको मूल्य, गुणस्तरबारे जानकारी लिइसकेका हुन्छन् । कसैलाई कुनै पनि ब्राण्डको सक्कली सामान भनेर बेचियो र भोलि उसले लगाउँदा रङ उड्यो, खुम्चियो वा च्यातियो भने ब्राण्डका नाममा व्यवसाय गर्नेहरू टिक्लान् त ? अब उपभोक्ता ठग्न त्यति सजिलो छैन । सरकारले केही गरेन भने पनि उपभोक्ता सचेतनाको कारण नक्कली ब्राण्ड आफै किनारा लाग्दै जान्छन् । किनभने आज नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीको क्रममा होस् वा पर्यटकको रूपमा, विभिन्न देशको भ्रमण तथा त्यहाँ किनमेल गर्न थालेका छन् । त्यसले पनि उनीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्ड, सामानको गुणस्तर, मूल्य आदिका बारेमा धेरै जानकारी हुन्छ । मैले ग्राहकलाई एकपटक त ठगुँला, तर दोस्रो पटकदेखि उनीहरूले मेरोबाट कुनै समान खरीद गर्दैनन् । आफ्नो नजीकका साथीभाइ वा परिवारलाई किन्न सिफारिश पनि गर्दैनन् ।
यो ग्रूपमार्फत आउने सामान देशका कुन कुन ठाउँसम्म जाने गरेको छ ? यसले नेपाली उपभोक्तालाई के फाइदा छ ?
यो ग्रूपले ६४ ओटा होलसेल विक्रेताको माध्यमबाट देशका सबैजसो प्रमुख शहरमा अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका सामान विक्री गरिरहेको छ । यसबाट उपभोक्तालाई मात्र नभएर व्यवसाय गर्नेलाई पनि फाइदा भएको छ । कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्ड चाहेर मात्र मगाउन पनि गाह्रो छ । हामीले विभिन्न ब्राण्डको कारोबार गरेकाले हाम्रोबाट लिँदा व्यवसायीले पनि स्थानीयस्तरमै बसेर अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डको व्यापार गर्न सहज भएको छ । यस्तै, उपभोक्ताले पनि अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डको सामान उपभोग गर्न पाएका छन् ।
यो ग्रूपप्रति उपभोक्ता र अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डको दृटिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
१० वर्षको अनुभवमा नराम्रो भन्ने छैन । अहिले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्ड पनि आरपी ग्रूपसँग काम गर्न खोजिरहेका छन् । कम्पनीको विश्वसनियताकै यो अवस्था आएको हो भन्ने लाग्छ । आउँदा दिनमा अन्य ब्राण्डसँग पनि सहकार्य गर्दै जानेछौं ।
नेपालमा अन्तररराष्ट्रिय ब्राण्ड ल्याउन कुनै समस्या छ कि ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ठाउँको अभाव हो । कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका लागि निश्चित स्पेश आवश्यक हुन्छ । त्यो भएन भनेर उनीहरू मान्दैनन् । नेपालमा विदेशी ब्राण्डको डिस्प्लेका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव छ । निश्चित स्थानको अभावमा उनीहरूले आफ्नो ब्राण्ड विक्रीवितरणको अनुमति दिन चाहँदैनन् । यसका लागि नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डकै लागि हुने खालका भवन बनाउनु पर्‍यो ।
आरपी ग्रूपको भावी योजना के छ ?
अबको योजना पर्यटनतर्फ हो । त्यसमा पनि रेष्टुराँमा लगानी गर्ने सोच छ । सन् २०१९ भित्रै काठमाडौं तीन र पोखराका साथै धरानमा एक/एकओटा अन्तरराष्ट्रिय चेनकै रेष्टुराँ सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
Superb..Keep it up Rupesh !!!